Naya course » खाना पछि किन खाने गुलियो ? खाना पछि किन खाने गुलियो ? – Naya course
प्राय: हामीहरु खाना खानु अघि वा खानाको समयमा धेरै पिरो खान्छौं र खाना पछि धेरै गुलियो खानेकुरा खाने गर्छों । तर, थोरै व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि खाना खानु अघि मसलेदार खाना खाने वा गुलियो खानेकुरा खाने ? अझ नियमित यसरी खाना खानेलाई पनि किन खाना पछि गुलियो खानेकुरा खाने भन्नेबारे जानकारी नहुनसक्छ ।
आयुर्वेदका अनुसार खानापछि गुलियो खानेकुरा खानाले एसिडको तीव्रतामा कमी आउँछ । जसले पेटमा जलन वा एसिडिटी हुँदैन । मिठाईको रुपमा कहिलैपनि सेतो चिनी मात्रै खानु हुँदैन । यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । यसबाट तयार पारिएको अरु मिठाईहरु समेत सकेसम्म कम गर्नुपर्छ । यसले मोटोपना र अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरु निम्त्याउन सक्छ । यसको सट्टामा सख्खर वा खुदो खाने गर्नुपर्छ । बरु खैरो रंगको चिनी स्वास्थ्यको लागि कम हानिकारक हुन्छ ।